GNOME 41 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny endriny, takelaka, fampiharana ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 22/09/2021 10:17 | Nohavaozina amin'ny 23/09/2021 00:32 | fampiharana
Rehefa afaka enim-bolana fampandrosoana ny fanombohana ny ny kinova vaovao amin'ny tontolon'ny birao GNOME 41 izay miaraka amina fanovana lehibe marobe izay ny manandanja indrindra indrindra ohatra ny fanitarana ny fahafaha-manamboatra ny fanjifana angovo.
Ny fahafaha-manova haingana ny fomba fanjifana herinaratra dia omena amin'ny alàlan'ny menio fitantanana ny satan'ny rafitra. Ny fangatahana dia manana fahaizana mangataka fomba fampiasana herinaratra manokana; , ohatra, ny lalao manahirana amin'ny fampisehoana dia mety hangataka maody avo lenta mba hampavitrika azy.
Ny zava-baovao iray natolotra koa dia ny safidy vaovao hanamboarana ny maody fitehirizana herinaratra, ahafahanao mifehy ny fihenan'ny efijery, vonoy ny efijery aorian'ny fotoana tsy fampiasan'ny mpampiasa sasany, ary vonoy ho azy izy io rehefa ambany ny bateria.
Ankoatr'izay ny interface mba hitantanana ny fametrahana ny rindranasa dia nohavaozina. izay manamora ny fivezivezena sy mitady programa mahaliana. Ireo lisitry ny fampiharana dia natao ho sari-tany misy famaritana bebe kokoa miaraka amin'ny famaritana fohy. Misy sokajy vaovao natolotra hizara fizarana isaky ny lohahevitra.
Ary koa ny pejy miaraka amin'ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fampiharana dia nohavaozina, izay nitombo ny haben'ny pikantsary ary nitombo ny atin'ny fampahalalana isaky ny fampiharana. Ankoatr'izay, ny lamina ny fikirana sy ny lisitry ny programa ary programa efa napetraka izay misy fanavaozana dia nohavaozina.
Etsy ankilany, afaka mahita izany isika tontonana multitasking vaovao no nampiana ao amin'ny configurator (Ivotoerana fanaraha-maso GNOME) hanamboarana ny fitantanana ny baravarankely sy ny birao.
Manokana, ao amin'ny fizarana Multitasking, omena safidy hanakanana ny antso maody topy maso fikitihana ny zoro ambony havia amin'ny efijery, manova ny haben'ny fikandrana amin'ny fisintomana azy amin'ny sisin'ny efijery, fisafidianana ny isan'ireo birao virtoaly, fampisehoana birao amin'ny mpanara-maso mifandray, ary ny fifindrana eo amin'ireo rindranasa ho an'ny birao ankehitriny amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny Super + Tab fitambarana.
Plus misy fampiharana Connections vaovao tafiditra miaraka amina fampiharana client ho an'ny fifandraisana birao lavitra mampiasa protokol VNC sy RDP. Ny fampiharana dia manolo ny fampiasa amin'ny fidirana amin'ny birao lavitra izay natolotra tao anaty Boxes teo aloha.
Ny endriny interface GNOME Music dia nohavaozina, izay nitomboan'ny haben'ny sary, nopetahany boribory ny zoro, nampiana ny fampisehoana ny sarin'ireo mpitendry zava-maneno, ny tontolon'ny fanaraha-maso ny playback dia nohavaozina.
Ny tobin'ny kaody mpitantana ny varavarankely Mutter dia nodiovina hanatsarana ny fahombiazany sy hanamorana ny fikojakojana.
Fahombiazan'ny interface tsara sy fandraisana andraikitra.
Ao amin'ny fivoriana any Wayland, nitombo ny hafainganan'ny fanavaozana ny fampahalalana amin'ny efijery ary nohafohezina ny fotoana fanehoan-kevitry ny tsindry bokotra sy ny fihetsiketsehana.
Fanatsarana ny fahamendrehana sy ny fahitana mialoha ny fikirakirana fihetsika maro-mikasika.
Ao amin'ny mpitantana rakitra Nautilus, ny dinika momba ny fitantanana famoretana dia nohavaozina indray ary ny fahaizana mamorona arsiva ZIP arovan'ny teny miafina dia nampiana.
Ny tetiandron'ny planner izao dia manohana fanafarana hetsika ary manokatra fisie ICS.
Torohevitra iray vaovao natolotra miaraka amin'ny mombamomba ny hetsika.
Ny browser Epiphany dia nanavao ny PDF viewer mpiorina PDF.js ary nanampy mpanakana doka YouTube miorina amin'ny script AdGuard.
Nasiana tontonana vaovao amin'ny finday vaovao hitantanana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny mpandraharaha finday.
Ny interface calculator dia nohavaozina tanteraka, ankehitriny dia miovaova ho azy amin'ny haben'ny efijery amin'ny finday.
Nanampy fanampiana ho an'ny sokajy ao amin'ny rafitry ny fampandrenesana.
Ny GDM izao dia manana fahaizana manomboka session any Wayland na dia miorina amin'ny X.Org aza ny efijery fidirana.
Ny session Wayland dia avela ho an'ny rafitra misy NVIDIA GPUs.
Ny disk Gnome dia mampiasa LUKS2 ho an'ny encryption. Nanisy dinika handefasana ny tompon'ny FS.
GNOME Boxes dia manampy fanampiana amin'ny filalaovana feo avy amin'ny tontolo iainana izay mampiasa VNC hifandraisana.
Ahoana ny fomba hahazoana na hitsapana ny kinova Gnome 41 vaovao?
Ho an'ireo liana amin'ny fanombanana haingana ny fahaizan'ny GNOME 41, fananganana mivantana mivelona mifototra amin'ny openSUSE sy sary fametrahana izay namboarina ho anisan'ny fandraisana andraikitra amin'ny rafitra fikirakirana GNOME no atolotra, ary ny GNOME 41 dia tafiditra ao amin'ny fananganana andrana Fedora 35 ihany koa.
Na eo amin'ny ampahany amin'ireo fonosana ho an'ny fizarana samihafa aza dia ho tonga ao anatin'ny ora maromaro any amin'ireo trano fitahirizan-dry zareo ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Tonga ny GNOME 41 miaraka amin'ny fanatsarana ny endriny, takelaka, fampiharana ary maro hafa